'बालेन शाहले मन जितिसके, अब हजारौं बालेन शाह जन्मिनेछन्'
‘बालेन शाहले मन जितिसके, अब हजारौं बालेन शाह जन्मिनेछन्’
– अनिल रायमाझी
देश अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छ। खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूको चौतर्फी चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। हरेक पटक उही पार्टीका नेता,उही प्रविधि,उही अस्थिरता अनि कुवाको भ्यागुता कुवामै भनेझैँ,काठमाडौंको मुहार जस्तो हुनु पर्ने थियो त्यस्तो मुहारमा काठमाडौँ महानगरलाई कसैले पनि परिणत गर्न सकेन। बरु उल्टै मुहारको अस्तित्व नै बिलाउँदै जाने क्रम जारी छ।
महानगरबासी पक्कै पनि असन्तुष्ट छन्, कोही आओस् जसले मन जित्न सकोस्,जसलाई भरोसा गर्न सकियोस् भन्ने भाव हरेक नागरिकमा उब्जिरहँदा त्यो भावको कदर गर्ने पात्रको रूपमा बालेन शाह देखिएका छन्। बालेन शाह नेपाली र्‍यापर गायन क्षेत्रमा पहिचान बनाएका गायक हुन र पेसाले उनी स्टकचरल इन्जिनियर हुन्। जो अहिले स्वतन्त्र तर्फबाट काठमाडौँ महानगरको मेयर पदका उम्मेदवारमा उठेका छन्।
युवा पुस्ता माझ लोकप्रिय बन्दै गएका बालेन शाह,सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको चर्चा धेरै नै हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालको चर्चालाई भोटमा बदल्न सक्लान् त ? यो उनको निम्ति चुनौतीको विषय पनि हो। फेसबुके चर्चाले चुनाव जितिँदैन भन्ने खालका आलोचना र अभिव्यक्तिहरू पनि विभिन्न धारका मानिसहरूबाट सुनिँदै छन्। तर सामाजिक सञ्जालको चर्चालाई भोटमा बदल्ने जिम्मा त परिवर्तन चाहने र नयाँ अनुहार चाहनेहरूको पनि हो।देश लथालिङ्ग भएको अवस्थामा स्वतन्त्र युवा केही परिवर्तन गर्छु भनेर अगाडी बढ्नुलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ। उनले आँटिलो काम गरेका छन्।अन्य युवामा पनि आँट रोपिदिएका छन्।
युवाहरू देशको स्थितिदेखि वाक्का भएर विदेश होमिने प्रविधिको हाबी हुँदै गर्दा,त्यस्ता युवाहरूको मन-मस्तिष्कमा देशप्रति केही आशा जगाउने र रङ्गिन भविष्य देख्ने कुरामा ठूलो भूमिका खेलेका छन्। देशबाट लिने मात्र हैन, देशलाई केही दिने चेष्टा पनि गर्नु पर्छ। दिने क्रममा सङ्घर्ष र सेवा गरियो भने, स्वतः देशबाट धेरै चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भाव युवाहरूमा वृद्धि भएको छ।
युवाहरूले राजनीतिलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा बदलाव,बालेन शाहकै कारण आँउदैछ। युवाहरू राजनीतिलाई बुझ्नकै निम्ति समय खर्चिन थालिरहेका छन्।अब नयाँ युगको सुरुवात हुनु पर्छ भन्ने भाव सार युवाहरूको रगत बगिरहेको छ। चुनाव बालेन शाहले हारे पनि देशको निम्ति,युवाहरूको निम्ति उनको सरासर जित सरह हुनेछ। यो एउटा परिवर्तनको क्रान्ति हो। अब यो क्रान्ति रोकेर रोकिने छैन। अब हजारौँ बालेन शाह जन्मिने छन्। बाटो पहिलाउने छन्,परिवर्तन फैलाउने छन्।
अहिले एक धारले भोट फर बालेन शाह भनिरहेका छन् भने अर्को एक धारले आलोचना पनि गरिरहेका छन्। खास गरी विश्लेषक, केही विज्ञ र राजनीतिज्ञहरूले उनी अपरिपक्व छन्,केटाकेटी नै छन् भन्दै अनुभवको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर हामीले उमेरलाई यति ठूलो मुद्दा बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। परिवर्तन चाहने पनि हामी ,रूपान्तरणको नारा लगाउने पनि हामी, युवा देशको भविष्यको कर्णधार हुन भन्दै माइक फुक्ने पनि हामी अनि जब युवा अगाडि बढ्छन् तब केटाकेटी ? राजनीतिमा युवाको भूमिका चाहिँ खाली बल प्रदर्शन गर्न मात्रै हो त ? अब राजनीतिमा युवाको भूमिका परिवर्तन गर्ने समय आएको छ। हामीले इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन, पृथ्वीनारायण शाह २० वर्षको उमेरमा राजगद्दी सम्हालेर युद्ध गर्न गएका थिए। त्यो उमेरमा गोर्खाको नेतृत्व गरेका थिए। उमेर त केवल अङ्क मात्र हो। हामीले अन्य राष्ट्रबाट पनि पाठ सिक्नु पर्छ, युवालाई दिइने मौका,युवाको जोस् जाँगरको सदुपयोग कसरी गर्ने यस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्छ।
फिनल्यान्डका वर्तमान प्रधानमन्त्री सान्ना मारिन जसले १० डिसेम्बर २०१९मा शपथ लिएकी थिइन् उनी त्यो बेला केवल ३४ वर्षको थिइन्। फिनल्यान्डको इतिहासमा सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री भइन्। चिल्लीका तत्कालीन राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिकको उमेर केवल ३७ वर्ष मात्र हो। यस्तो उदाहरण धेरै छन्। इतिहास कोर्ने समय आएन र अब ? हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हैन केवल एउटा महानगर प्रमुख पदको भइरहेको छ। हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक अनुभव भएकाहरूसँग विकास गर्ने, काम गर्ने इच्छाशक्ति नै देखिएन। काम गर्ने, परिवर्तन ल्याउने, देश बनाउने इच्छाशक्ति हुनेहरूमा राजनीतिक अनुभव खोजिन्छ। यो ठूलो विडम्बना हो। अनुभव त काम गरेर कमाउने कुरा हो।
अब नागरिकले अनुभव भएकालाई हैन इच्छाशक्ति भएकालाई छान्ने समय आयो किनकि इच्छाशक्तिले अनुभव आफैँ छिचोल्छ। चर्चाको निम्ति उम्मेदवारी दियो भन्नेहरू पनि धेरै छन्,चर्चा हुनु स्वाभाविक हो, काम र कदम नै चर्चाशील छ। चर्चाले चेतना जन्माएको हामीले भुल्नु हुँदैन। मानिलिऊ भोलि बालेन शाहले मेयर जिते। म त के भन्छु भने त्यसपछि हामीले उनीबाट धेरै आशा अपेक्षा राख्नु पनि हुँदैन किनकि उनी बिग्रिएको धमिलो कुवा सफा गर्न जाँदै छन्। कुवा सम्मको बाटो उनले पहिला पत्ता लगाउनु पर्छ। सफा गर्ने विधिलाई परीक्षण गर्नु पर्छ,त्रुटिहरू फेला पार्नु पर्छ। जग बनाउनु पर्छ। समय पक्कै लाग्छ। गिजोलिएको त्यो प्रणाली सुधारमा काम गर्नु पर्छ। प्रणाली सुधार भएपछि बल्ल काम गर्ने वातावरण बन्ने न हो। कुवा सफा भएपछि पछि आउँदो प्रमुखहरूले पनि तिर्खाएकालाई सङ्लो पानी सजिलै प्रदान गर्न सक्छन्।
बालेन शाहले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सफलता के हो भने जतिले बालेन शाहले जित्दैनन् भनेर बसेका छन् खास गरी राजनीतिज्ञ र कार्यकर्ताहरू ,नेताको झोले र झन्डा बोकेर हिँडेकाहरू उनीहरूको मनमा बालेन शाहले डर पैदा गरिदिएका छन्। भयानक डर। कतै ,जिस्किदा जिस्किँदै चिप्लाउने त हैन ? कतै हेपेको खोलाले बगाउने त हैन ? हाम्रो देश बिग्रिनुको मुख्य कारण नै के हो भने नेता, नेतृत्वको मनमा डरको कमीले हो। डरले खास गरी मानिसको मन-मस्तिष्कमा सतर्कता पैदा गर्छ। चेतना पैदा गर्छ। मानिस सचेत हुन्छ ,उसले नराम्रो नकारात्मक सोच्नै सक्दैन। त्यो डर अब सुरु भइसक्यो। आज एउटा युवा यसरी अगाडि बढ्दा यतिको डर सृजना हुन्छ भने भोलि हजारौँ युवा अगाडि बढे कति डर पैदा हुने थियो होला। सोचौं त, र त्यो डरको परिणाम र नतिजा हरेकले देख्न भोग्न पाउँथे। इच्छाशक्ति नभए पनि डरले इच्छा जगाउने थियो।
म बालेन शाहको अन्धभक्त भएर यो लेख लेखेको हैन। प्रत्येक पार्टीका नेतालाई मौका दिँदा पनि देश परिवर्तन नहुँदा स्वतन्त्र व्यक्ति अगाडि आउनु पर्छ भन्ने मेरो जोड हो। तर त्यो व्यक्ति परिचालित हुनु भएन। उ साँच्चिकै स्वतन्त्र हुनु पर्‍यो उसको दिमाग मन शैली सबै स्वतन्त्र हुनु पर्छ। बालेन शाहप्रति पनि केही प्रश्नहरू उठेका छन्। उनले ती कुराहरूको पनि समीक्षा गर्नु पर्छ। हिपहफ र र्‍यापरलाई नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा कुन दर्जा दिने ? किन दिने ? यो क्षेत्रले उठाएको सामग्री, शब्दावली, प्रकृति नेपाली समाजमा पचाउन लायक छन् त ? त्यसलाई बार्गेनिङ गर्नु पर्ने जरुरत छन् त ? यी कुराप्रति विगत देखिनै बहस भइरहेको छ। यसबाट निम्तिएका विकृति विसङ्गति र नेपालले बोकेको आफ्नो छुट्टै संस्कार संस्कृतिमा असर पुग्ने त हैन ? उनी पनि यही क्षेत्रमा भएको नाताले उनी के आम परम्परावादी, धार्मिक र हरेक वर्गको मानिसको साझा मेयर बन्ने हैसियत राख्छन् त ? यो प्रश्न उनी माझ तेर्सिएको छ।
घोषणा पत्र सबैको राम्रो हुन्छन्, मिठो सपना र कल्पना कसलाई मन नपर्ला र घोषणा पत्र बनाउन कठिन पनि छैन, किनकि समस्याहरू धेरै भएको ठाउँमा समस्याको समाधान गर्दिन्छु भनेर लेख्नु खासै मिहेनत गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। बालेन शाहले समावेश गरेको घोषणा पत्र भित्रकै काम मात्र भयो भने पनि ठिकै छ तर त्यो काम कसरी सम्भव छ ? स्रोत के हो ? कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? भन्ने खालका कुराहरू उनले स्पष्ट पार्न सके झनै राम्रो। पश्चिमा संस्कृतिका पागलप्रेमी र्‍यापर हुन बालेन शाह भन्नेले यस्तो पनि भनिरहेका छन्। यस विषयमा पनि उनले गम्भीरता पूर्वक सोच्नु पर्ने हुन्छ। काठमाडौंको मौलिकता र पहिचान फर्काउने काम उनले गर्नु पर्छ।
विदेशी शैली र संस्कृति लाद्ने काममा पूर्णविराम अवश्य पनि लाग्नु पर्छ। काठमाडौँमा नेवार समुदायको सभ्यतालाई जोगाउने र झनै प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा उनी अगाडी बढ्नु पर्नै हुन्छ। युवा पुस्तामाझ हरेक समुदायको धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान र सभ्यताहरू के हो ? कसो हो ? कसरी जोगाउने भन्नेबारे प्रशिक्षणहरू दिने र जागरण फैलाउने योजनाहरूमा उनले काम गर्नु पर्ने हुन्छ किनकि जति पनि हाम्रो चाड पर्व ,कर्म,संस्कार,खाना,लुगा छन् ती सबै वैज्ञानिक छन्। अहिलेको युवा पुस्ताले जेमा पनि विज्ञान खोज्छन् र त्यो विज्ञान हाम्रो पुर्खाहरूले बुझाउन नसकेको कारण अब नयाँ पुस्ताकै काँधमा त्यो जिम्मा पनि थपिएको छ। समन्वयात्मक, अध्यात्मवाद र सर्वधर्म समभाव आजको आवश्यकता हो। बालेन शाहलाई शुभकामना ।
सरकार, तलव बढाएर महंगी उपहार नदेउ !
नेता शर्माको विश्लेषण : मधेशमा माओवादी ओरालो लाग्नुका सात कारणहरू
गौतम बुद्धको जीवन र दर्शन